G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင်
1 G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် on 4th May 2009, 9:14 pm
ဒီနည်းက တော့ လွယ်ပါတယ် ..ဘာမှလဲ မဟုတ်ပါဘူး .. gtalk ကို run box ကနေခေါ်ပြီးတော့ သုံးတဲ့နည်းလေးပါ ... မသိရင်တော့ ဆရာလိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ .. ဟီးဟီး ....
g talk ကို shortcut ထုတ် .. ပြီးရင် rename ဥပမာ .. gtalk ဆိုရင် gtalk ပေါ့ ..အဲဒီ နာမည်ကိုတော့ မှတ်ထားနော် ... အများကြီးသုံးချင်ရင်တော့ nomutex ရိုက်ထည့်ထားပေါ့ .. ပြီးရင်
C ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ....ပြီးရင် window ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့် .. system 32 ကိုဖွင့် .. ပြီးရင် စောစောက gtalk shortcut ကလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ .. အဲဒါဆိုရင် run box ကနေပြီးတော့ gtalk ကိုခေါ်လို့ ရပါပြီ ........
2 Re: G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် on 9th May 2009, 9:11 am
3 Re: G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် on 21st May 2009, 10:19 pm
ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ မှတ်သားလောက်ပါ၏။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
4 Re: G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် on 27th September 2009, 5:57 pm
အသေးစိတ်လေး ထပ်ရှင်းပြပေးပါအုန်း။ မလုပ်တတ်လို့ပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရှင် [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင် on 27th September 2009, 8:46 pm
smile wrote: အသေးစိတ်လေး ထပ်ရှင်းပြပေးပါအုန်း။ မလုပ်တတ်လို့ပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အမရေ ဒီလိုပါဗျာ .. ကိုထက်ပြောတာလေးက အမ မှာ သုံးနေတဲ့ gtalk ကို Start - Run မှာ ရိုက်ပြီးခေါ်တာလေးပါ .. ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ အမ မှာရှိတဲ့ gtalk ကို Copy ကူးလိုက်ပါ မကူးခင် အရင်ဆုံး rename ပြောင်းလိုက်ပါ .. ဥပမာ .. gtalk ပေါ့ ပြီးရင် Start - Run မှာ system32 ဆိုတာလေး ရိုက်လိုက်ပါ .. ဒါဆို System32 folder ကျလာမှာပါ အဲဒီအောက်မှာ Paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ Start - Run ကိုပြန်သွား ပြီးရင် gtalk ကို ရိုက်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ gtalk ပွင့်လာမှာပါ ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: G talk ကို သူများတွေမသိအောင်ဖွက်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုရင်